နာတာရှည်ရောဂါများ ကင်းဝေးစေမည့် စားသောက်နည်း
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ စတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေဖြစ်နှုန်း လျော့ကျစေမယ့် စားသောက်နည်းတွေရှိပါတယ်။ – အပင်ထွက်အစာများများ စားပါ အစားအသောက်မှာ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံများများ စားသင့်ပါတယ်။ထမင်းစားပြီးတိုင်း၊ စားပြီးတိုင်း အသီးတစ်မျိုး၊ နှစ်မျိုးလောက် စားပေးနိုင်ရင်...
အာထရာဆောင်း ဓာတ်ပုံအရ သန္ဓေသား ပုံသဏ္ဌာန်က ပြိုင်ကားပုံဖြစ်နေ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဇနီးက ပြိုင်ကားတစ်စီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အာထရာဆောင်းဓာတ်ပုံနဲ့တစ်ကွ Reddit ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူတွေအကြား ရေပန်းစားသွားပြီး ရှဲလ်သူတွေ၊ မှတ်ချက်ပေးသူတွေနဲ့ မြိုင်ဆိုင်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အာထရာဆောင်းပုံမှာ ဘီးနှစ်ဘီး၊ စောင်းနေတဲ့ အမိုးတစ်ခု၊ ဒရိုင်ဘာပြတင်းပေါက်နဲ့ စတီယာရင်နဲ့...
၀က်ခြံအမာရွတ်ကင်းသော အလှတရားပိုင်ဆိုင်စေရန် . . .
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၀က်ခြံအဖုအပိမ့်တွေကို ကုတ်ခြစ်တာကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုတွေ မဖြစ်စေဖို့နဲ့ အသားအရေပျက်စီးမှု မဖြစ်စေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – ၀က်ခြံကို မကုတ်ရ၊ မဖဲ့ရ ၀က်ခြံဖုတွေကို လက်နဲ့ဖဲ့ဆိတ်တဲ့အခါ ၀က်ခြံပျောက်သွားရင်တောင် ရောင်ရမ်းမှုကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် အမာရွတ်ထင်တတ်ပါတယ်။ အမာရွတ်မထင်စေချင်ရင်...
ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ သုံးနိုင်သလဲ
မေး။ ။ ဆရာတစ်ခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။ ကလေးတွေခြင်ကိုက်မှာစိုးလို့ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင် ၀ယ်သုံးပါ တယ်။ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်က ဘယ်လောက်ကြာရင် အာနိသင်ပြယ်တာလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာရင် လျှော်လို့ရလဲ၊ ဘယ်နှစ်ခါလျှော်ပြီးရင် မသုံးသင့်တော့ဘူးလဲ၊ အဲဒီခြင်ထောင်တွေကို ဆေးစိမ်ဆေးပြားဝယ်ပြီး ပြန်သုံးလို့ရသလား။ သိချင်လို့ပါခင်ဗျ။ ကိုဝေမင်း၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှု...
ဒူးရင်းသီး စားသင့်သလား . . .
၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် ၊ (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒူးရင်းသီးက အာဟာရရှိတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ဒူးရင်းသီးမှာ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှု များပါတယ်။ အရွယ်တော် ဒူးရင်းသီးတစ်လုံးမှာ ၆၀၀ ဂရမ်လောက်လေးပြီး ၈၈၅ ကယ်လိုရီပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ပိန်တဲ့သူတွေ...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဘာကြောင့် သွားပဲ့တတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. “ကြာကြာဝါးမယ့် သွား၊ အရိုးကြည့်ရှောင်”ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ အမာတွေကို ၀ါးမယ်ဆိုရင် သွားကပဲ့နိုင်ပါတယ်၊ ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝတရားအရ ဘယ်အရာမဆို ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး...
မသန်စွမ်းသူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း မခံရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ နှလုံးသားထက်မြက်သူ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဦးမြတ်သူဝင်း (ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၁၉၆၆ခုနှစ်တွင် ပြည်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးရာပါမသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့သူ ဦးမြတ်သူဝင်းသည် ၁၀တန်းကို ပြည်မြို့မှ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ “ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်တော့ ဆေးတက္ကသိုလ် အမှတ်မှီပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တက်ခွင့်မရဘူး၊...
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အကြောင်းပြချက် ၁၀ ရပ်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူဦးရေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်တတ်မှန်း သင်သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် တခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်လည်း ခေါင်းတစ် ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ – သကြားပါတဲ့ အချိုရည်၊ ကဖင်းပါတဲ့...
ဂျူးဂျူးကေ ၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘ၀
လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှု … ညီမက အခု တယောသင်တန်းဖွင့်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ တယောပွဲတွေ လက်ခံပါတယ်။ သီချင်းတွေလည်း ဆိုပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေက ရိုက်ဖြစ်တာ သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံစံ … အစားအစာတွေစားရင် အဆီရှောင်တယ်။ အဓိက ရေများများသောက်တယ်။ တခြားကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုလည်းလေ့လာပြီး ဂရုစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။...
Page 509 of 653« First‹ Previous505506507508509510511512513Next ›Last »
အသားအရေ၊ ဆံပင်နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကြက်ဆူဆီအစွမ်း
ရလဒ်ပြောင်းပြန်ထွက်နိုင်သည့် စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျရေး နည်းလမ်းများ
မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှု လျော့ကျစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ